ညမင်းသားကိုကို မှ ဘော်ဒါအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ အမှားမယွင်းများရှိခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါရစေ.. လာရောက်အားပေးသူအပေါင်းကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်မလေး ချောချောလှလှလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီး အိုကေလို့ စိုပြေနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ညမင်းသား ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် :D Monday,4June 2012
ကဲ...အားပါးတရသာ ဒေါင်းပြီးကြည့်ကြပေတော့..။ ဘော်ဒါတို့အတွက် ဒေါက်တာချက်ကြီး စီက ယူလာတာပါ
“အ“ အက္ခရာနဲ့ စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက တော်တော်များလို့ လောလောဆယ် အဲဒီထဲက “အချစ်“ နဲ့ စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို အရင်ခွဲထုတ်ထားလိုက်ပါတယ် အချစ်ကြိမ်လုံး
အချစ်အတွက် ဆက်လက် အသက်ရှင်မယ်
အချစ်ကိုသိချိန် (ရေးသူ ပေါသွပ် - Credit: ညမင်းသားဖိုရမ်)
အချစ်ဟောင်း အချစ်သစ် အချစ်တပတ်နွမ်း
အချစ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အိမ်ကလေး
အချစ်ဇာတ်လမ်း ရိုးရိုးလေး တစ်ပုဒ်
အချစ်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး (တင်ဆက်သူ KMT99 – Credit: အချစ်တက္ကသိုလ်)
အချစ်ဦးမို့ ရစ်မူးမိ (တင်ဆက်သူ KMT99 – Credit: အချစ်တက္ကသိုလ်)
အချစ်နဲ့စစ် ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အချစ်နဲ့စစ် ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အမုန်းလယ်ရဲ့  မုန်းပင်လယ်
အစက ဒီလိုမှန်း မသိလို့
အသက်နှင့် ရမ္မက် (မျှဝေပေးသူ - လင်းဆက်)
အမုန်းတရား၏ အဆုံးသတ်မျဉ်း (မောင်ဟိတ် )
အိုး မိုင် ဒါလင်
အို ဆရာမရယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အိုးချင်ထိ ကြိုးချင်းညိ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးတဲ့သူ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အ . စ . လ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
အမိုက်မှောင်ဆရာကြီး ၁+၂ နှစ်တွဲပေါင်း (မြန်မာဆိုင်ဘာ)
အကိုက ဖိုက်တော့ အညိုက ကြိုက်ပေါ့ (ဘိုမောင်ရေးသည် … from Dr. Chatgyi)
အပျော်ချစ်ကလေး ဇာတ်သိမ်းပိုင်း (Typed by: KMT99 - from achittatkatho)
“ဆ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
ဆင်းရဲတွင်းက နက်လေတော့ (မောင်ဟိတ်)
ဆရာမလေးကို ပညာပေးခြင်း (ကိုပေါ - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ တစ်ညတာ (မောင်ဟိတ်)
ဆံပင်ညိုညိုလေး (ကိ်ုပေါ - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ဆင်စခန်းဝယ် ငတင်ကြမ်းသည် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ဆံပင်ရှည်မင်းသမီးလေး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ဆရာမကိုပဲ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ဆွဲစိလိုက်မယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
“လ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
လေလှိုင်းထဲက ချစ်ပုံပြင် ၁
လေလှိုင်းထဲက ချစ်ပုံပြင် ၂
လမ်းခွဲ (ဟန်ရဲဇော် -မြန်မာဆိုင်ဘာ)
လွမ်းနေမယ် နန်းလေးရယ် (Crazzy4)
လမ်းကြုံရင် ၀င်စားသွားပါ ၁
လမ်းကြုံရင် ၀င်စားသွားပါ ၂
လူနာကုတင် ၃၁ (နေနိုင်သူ - မြန်မာဆိုင်ဘာ)
လှလှလေး စက်ချုပ်ဆိုင် (ဇော်ဦး - မြန်မာဆိုင်ဘာ)
လူယုံ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
လူတွေမြင်အုံးမယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
လူးလူး လိုလားလို့ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
“ရ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
ရာဇ၀င် မသိရင် ကညာခင်တိုင်းဟာ အပျိုစင်
ရှေ့ နေမလေး သီရိနှင့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက် အမှု (PDF by: ဒေါက်တာချက်ကြီး ~ Credit to: အကယ်ဒမီ)
ရေမရောတဲ့ နို့ချိုချို ( တင်ဆက်သူ~ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ရင်နာအောင်လုပ်ရက်တယ် (တင်ဆက်သူ~ babahta - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ရဲရဲရင်ဆိုင် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ရွာနားကမြက် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ရှောင်လေဝေးဝေး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ရမ္မက်ဆန္ဒ နှင့် သားကောင်
ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံမယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ရွှေကြိဂံ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
“စ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
စုခါးရီ ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စုခါးရီ ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စပွန်စာ အန်ကယ်ကြီး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စေလိုရာ စေပါတော့ ရှင် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
စိတ်ကူးမဲ့ ကာမဘုံသို့ (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)
စွဲနေပြီ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
“မ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
မမကို အလိုမလိုက်နဲ့ မောင် http://www.mediafire.com/?g0wmav4xinw8we2
မမ မောင်မောင် မို့မို့ http://www.mediafire.com/?jec34xyt2aocl69
မမဇင် - ၁ http://www.mediafire.com/?5inkh9ks7nfn8v6
မမဇင် - ၂ http://www.mediafire.com/?1nau9ltyo05qp66
မချောသုံးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက် http://www.mediafire.com/?8c7ed8iaje1eabx
မချစ်တဲ့သူများ မဖတ်ရ http://www.mediafire.com/?br8ebx42rwi5jqg
မတင်းတိမ်သော ကာမဘုံ http://www.mediafire.com/?bju28xdlulb3xb8
မရည်ရွယ်သော အဖြစ်များ http://www.mediafire.com/?cp8l5rlpqo69yjo
မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၃ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၄ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၅ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မုန်တိုင်းထန်ထန် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မချစ်ရင် မနေနိုင်တာက လွဲလို့
မမအေးရဲ့  မောင်လေး
မီးကိုတိုးတဲ့ ဖလံပိုး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မမရဲ့ မောင်လေး (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မမလှလှ ခပ်ရွရွ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မယုံမရှိနဲ့ တကယ်ရှိတယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မင်းကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပြီ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မောင့်အကြိုက်လိုက်လျောမယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မိကဲလေး (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
မင်းရဲ့ အကြည့်တွေကို သိနေတယ်
မြောက်ကျွန်းသူ လူပေလော (Typed by: KMT99 - PDF by: ဒေါက်တာချက်ကြီး)
မမပွင့်ကို ဖွင့်တဲ့သူ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
“သ“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ
သင်္ဘောသား ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သင်္ဘောသား ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သင်းကွဲ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သုံးခွန်ခြောက် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
http://www.mediafire.com/?5otbhfkat3rol62 သင်္ချိုင်းကုန်းက ငဖြုတ်ကြီး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်း (Zarni 86)
သင်ဇာနှင့် ကျွန်တော် (Hotrod)
သမီးလဲ ဦးလိုပါပဲ (ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သမီးချစ်တဲ့ဦး ၁+၂ (ရေးသူး ခင်သီထွန်း - ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သူဌေးကတော်လေး ငယ်ငယ် (Typed by KMT99 – from achittatkatho)
သက်ထားအလိုကျ (Typed by KMT99 – from achittatkatho)
သစ္စာရှိပါ ၊ လိင်ကိစ္စကို ဆင်ခြင်ပါ (Typed by KMT99 – from achittatkatho)
သိပ်ဆိုးတဲ ကိုမောင် (Typed by KMT99 – from achittatkatho)
သမီးကိုလဲ ချစ်ပါနော် (Typed by KMT99 – from achittatkatho)
အားလုံးပဲ ဖတ်ရ အဆင်ပြေအောင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှသော စာအုပ်တွေကို ပြန်စုစည်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. တတ်နိုင်သမျှ မြန်မာအက္ခရာနဲ့ စီပြီးတော့ တင်ပေးသွားပါ့မယ် ၊ ဒီနေရာမှာ တောင်းဆိုချင်တာကတော့ ကျနော်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်များရှိရင် ကျနော့်ကို ပီအမ်ပို့ပြီး ပြောပေးပါ ၊
ကျနော်ပြန် update လုပ်ပေးပါ့မယ် ၊ လင့်တွေအကုန် မတင်နိုင်လို့ အများအဆင်ပြေတဲ့ မီဒီယာဖိုင်းယားပဲ သုံးလိုက်ရပါတယ် ၊ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ပင်လယ်ပြာပြာထဲမှာ ရသပြာပြာလေးတွေ ပေးမယ့် စာအုပ်ပြာပြာလေးတွေကို ခံစားကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ ♥မျှဝေသူ♥
seven13 September 2012 05:13ဖော်မပြနိုင်အောင်ပါပဲ ကိုချက်ကြီးရေ very very thanks!!!!ReplyDeleteMr.talkie28 December 2012 08:31သာဓုပါကွာ..သာဓု..ReplyDeletekingofuniverse3 January 2013 08:43ဗီဒီယိုလင့်တွေပေးပါ download လုပ်ချင် လို့ReplyDeletesoe ya zar12 January 2013 08:14ရုပ်ပြတွေပါတင်ပေးပါReplyDeleteညမင်းသားကိုကို19 January 2013 05:32download လုပ်ချင်ရတော့ IDM ကိုသာ install လုပ်ထားလိုက်ပါReplyDeletekyawmyohtut7 February 2013 02:28ဗဟုသုတ|နည်းပညာတွေတင်ပေးပါ။ReplyDeletekyawmyohtut7 February 2013 02:30IDMဆိုတာဘာလဲ။ReplyDeleteyetunnaing999918 February 2013 09:44ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို ကျွန်တော်ကစာပဲဖီးတာတာမို့ ဟီး....ReplyDeleteko say21 March 2013 03:11ဒေါင်းမ၇ပါ။ကူညီပါအုံး။ReplyDeleteAdd commentLoad more...
မိမိအဆင်ပြေသော player ကိုထား၍ ကျန်တစ်ခုကို PAUSE လုပ်ပြီးနားဆင်ပါ
ဤဘလော့သည် အပျင်းပြေကြည့်ရန်နှင့် SEX ကိစ္စစိတ်ဝင်စားသူများ အတွက်ပါ မည်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုခြင်းမရှိပါ.... ဘော်ဒါတို့စီမှာ ရှိတဲ့ မူဗွီတွေ ဓာတ်ပုံတွေ ပေးပို့လိုပါက nyamintharkoko2010@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ....
ညမင်းသားကိုကို ရှိ/ မရှိ
ကဲ...အားပါးတရသာ ဒေါင်းပြီးကြည့်ကြပေတော့..။ ဘော်ဒါတို့အတွက် ဒေါက်တာချက်ကြီး စီက ယူလာတာပါ “အ“ အက္ခရာနဲ့ စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက တော်တော်များလို့ ...
“က“ အက္ခရာနှင့် စသော ဇာတ်လမ်းများ ကိုကိုမောင်မောင် တော်တော်ဆိုး (အပိုင်း - ၁) http://www.mediafire.com/?bqzrjmbr57hv3w5 ကျူရှင်စာရေး ...
အင်္ကျီတောင် မချွတ်နိုင်တဲ့ အတွဲ
ငရဲကြီးတာ မမသိတယ် မြန်မာမလေး
အဟောင်းလား အသစ်လားတဲ့ မသိဘူးဗျာ တွေ့ရာ အကုန်တင်ပေးတာပဲ ကြိုက်တဲ့သူကြည့်ကြပေါ့နော် ကျောင်းသူ
ပါကင်ဖွင့်တာ ပါတဲ့ ပါကင်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါ
ပုလင်းတွေ့ရင် မော့သောက်တတ်သူများ သတိထားပါ
ကြိုက်ရင်ကုန်းတယ် ဝယ်ရင်ရောင်းတဲ့ ကျောင်းသူလေးပါ
Miss Korea 2002 ပိုင်ရှင် Nana Keum
Miss Korea 1995 ခုနှစ်ပိုင်ရှင် HAN SUNG JOO
"က" ကြီး ဘဏ်ဝန်ထမ်းလို့တော့ ပြောတာပဲ
အဖြူ နဲ့ အမည်း
ညမင်းသားကိုကို....... Awesome Inc. template. Powered by Blogger.